Sida sawir fiican loogu qaato moobilkaaga | Androidsis
Sida sawir fiican looga qaato moobilkaaga
Qalabkeena gacanta ayaa sii kordhaya, gaar ahaan markaan ka hadlayno tikniyoolajiyada isku dhafan qaybteeda kaamirada. Halkee ka hor intaanan haysan wax ka yar aalad loogu talagalay inay naga baxdo dhibaatada, waxaan ogaanay in taleefanka casriga ah uu dib ugu laabtay asalka kamaradda is haysta.
Waxaan haynaa fursado badan iyo waxyaabo kale oo badan oo tikniyoolajiyad ah oo ay soo bandhigaan aaladaha Android, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan gacan kaa siino casharkaan. Waxaan ku baraynaa sida loogu qaado sawiro wanaagsan moobilkaaga Android si aad ugu iftiimiso Tumblr iyo Instagram sida xiddig dhab ah. Soo hel talooyinkeena oo dhan.
1 Hel sawirro asal ah
2 Sawirada dadka
3 Sawir qaadista muuqaalka muuqaalka
4 Dhismayaasha sawirka
5 Sida loo qaado sawirrada biyaha hoostooda
Hel sawirro asal ah
Waxa ugu horreeya waa hal-abuurnimo, helitaanka qaadashada sawirrada asalka ah way sii kordheysaa dhib, taasi waa sababta aan kugula talineyno inaad haysato qalab leh dhowr kamaradood sida xagal ballaadhan iyo dareemayaal sawirro Macro ah, Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si buuxda uga faa'iideysato astaamaheeda.
Si aad u hesho sawirro asal ah waxaan ku dhiirrigelin karnaa shabakadaha bulshada sida Tumblr (LINK) halkaas oo aan ku qaban karno fikradaha kadibna aan ku abuuri karno hal-abuurkeenna, waa kuwan qaar fikradaha wanaagsan ee qaadashada sawirrada asalka ah:
Ka faa'iidayso qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca in samada laga qaado sawiro midabyo kala duwan leh.
El iftiinka dambe Waxay u egtahay inay kharribto sawirada, laakiin markii si sax ah loo isticmaalo, waxay na siisaa qalab hal abuur leh, gaar ahaan qorrax dhaca.
Tuur dhibco biyo ah dhirta waxay noo ogolaaneysaa inaan qaadno sawiro aad u xiiso badan oo doog ah.
Ku ciyaar aragtida, Qaabka xagasha ballaadhan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sawirro dhow ka qaaddo dadka iyo walxaha, sidaa darteed walxaha kale waxay ka soo muuqan doonaan asalka iyagoo cabbir yar oo khiyaano ah.
Iibso safar, Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka faa'iideysato habka "soo-gaadhista dheer" ee aaladaha moobiilku badankood leeyihiin oo aad ka heli doontid sawirro iftiin leh oo asal ah
Sawirada, fadlan had iyo jeer jiifsan. Qaabka tooska ah ee loogu talagalay Instagram.
Had iyo jeer iska hubi inaad nadiifiso muraayadaha taleefanka gacanta natiijooyinka ugu fiican.
Ha isticmaalin flash-ka illaa ay aad u muhiim tahay mooyee.
Haddii aad shaki qabto, Ka hawlgeli shabakadda sawirka si aad u dhigto walxaha ama dadka si wanaagsan.
Kuwaas waa uun qaar ka mid ah tabaha in aan maskaxda ku hayno, si kastaba ha noqotee, aan eegno talooyinka kale.
Si aan u sawirno dadka, waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa inaan tixgelinno haddii aan haysanno dareemayaal noo oggolaanaya inaan sawirro ka qaadno iyo in kale. "Sawir", Tani waxay inbadan inaga caawin doontaa inaan si sax ah diirada u saarno.
Habka "Sawirka" aaladaha badankood waa la hagaajin karaa, Taladaydu waxay tahay inaadan ku xadgudbin "blur" isla markaana aad yareyso natiijada howsha si aad u gaarto sawir dabiici ah sida ugu macquulsan. TWaa inaan sidoo kale hagaajino «Habka Quruxda», maadaama mararka qaarkood ay ku siin karto aragti ah in sawirku yahay mid macmal ah.
Haddii waxa ugu muhiimsan ee sawirka ku saabsan uu yahay qofka, dharkiisa ama waxyaabaha ay ka kooban yihiin, had iyo jeer isticmaal asalka midab isku mid ah, sida ugu macquulsan, iyo haddii ay caddaan ka fiican tahay.
Had iyo jeer ka fogow iftiinka dambe ee gadaasha mawduuca. Fikrad ahaan, waxaad haysataa ilo iftiin dabiici ah, ama laba nal oo hore oo dabiici ah si aad uga fogaato hooska oo aad u hesho dhammaan faahfaahinta.
Had iyo jeer mawduuca si fiican udub dhexaad u ah, Haddii aan sawir ka qaadno qof oo uusan dhexda kaga jirin sawirka, natiijadu waxay naga dhigeysaa inaannaan diirada saarin faahfaahinta.
Weligaa ha isticmaalin tooshka Waxay ku siin doontaa natiijooyin liita maqaarka, dhalaalka iyo indhaha.
Raacista tilmaamahan yar waxaad ka heli doontaa sawirro wanaagsan oo dadka ah. Ha iloobin haddii aad isticmaali doontid ilaha iftiinka macmalka ah, waa inaadan dooran midabyo aad u qabow, maadaama maqaarku u muuqan doono caddaan xad dhaaf ah. Dooro nalalka midab-dhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah si aad uga fogaato hooska sida ugu macquulsan. Xusuusnow taas Moodalka "Portrait Mode" wuxuu u eg yahay inuu ku guuldareysto tafaasiisha yar yar, sawirro badan qaado ka dibna hubi midka ugu fiican ee taleefankaaga gacanta lagu farsameeyo.
Sawir qaadista muuqaalka muuqaalka
Muuqaalka dhulku badanaa caqabad weyn ayuu ku yahay aaladaha mobilada, sidaa darteed waxaan kaaga tagi doonaa tabaha qaar ka hor sawirka.
Dhaqaajiso qaabka HDR qalabkaaga mobilada, taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad iska ilaaliso "cirka oo gubanaya" oo ka dhigaysa mid dabiici ah.
Ka fogow waxyaalaha is khilaafsan, ma ahan midab, laakiin dhalaal. Waxay hagaajinaysaa soo-gaadhista si aagagga mugdiga ahi u madoobaanin inta soo hadhayna ay u yihiin kuwo xad-dhaaf ah caddaan.
Xaaladdan oo kale, waxay ku habboon tahay in la sameeyo iyada oo aan laga wada helin kamaradaha oo dhan marka laga reebo midka weyn. 'Wide Angle' waxay badanaa bixisaa aberro badan oo ka dhigaya muuqaalka dabiiciga mid aan dabiici ahayn. Waxa aan kugula talin karo ayaa ah haddii aad haysato qalab "Sirdoonka Cilmiga ah" ka faa'iideyso astaantan si aad midabbada ugu hagaajiso sida saxda ah, waxaad heli doontaa natiijooyin cajiib ah
Wax kale oo weyn oo la ilaaway waa qaabka «Macro», noocan sawir qaadista ah ayaa kuu oggolaan doona waxyaabaha soo socda:
Qaado sawirro faahfaahsan oo aad isugu dhow cayayaanka iyo xayawaannada aadka u yaryar.
Soo qaad talaal dabiici ah oo weyn sida caleemaha, laamaha, ubaxyada, iyo xitaa xuubka caarada.
Sidaan horay u sheegnay, waa inaan marwalba haysannaa ilo wanaagsan oo iftiiminta, taasi waa, waxaan ka faa'iideysan doonnaa saacadaha dhexe ee maalinta, illaa aan si gaar ah u dooneyno inaan qabsanno qorrax dhaca ama qorax soo baxa.
Dhismayaasha way fududahay in la sawiro guud ahaan, Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay laba arrimood oo go'aaminaya:
Dhererka dhismaha: Tani waxay ka hortagi kartaa inay ku habboon tahay tallaal, sababtaas awgeed ayaa lagula talinayaa inaan ku qaadno sawirka qaabka 'Wide Angle format' si ay si buuxda ugu habboon tahay.
Saacadda maalinta: Iftiinka dabiiciga ahi waa go'aan qaadashada dhamaan faahfaahinta dhismaha, sidaa darteed waxaan u baahanahay inay ahaato waqti fiican oo maalin ah iyo in Qorraxda aan la dhigin dhabarkiisa dhismaha, laakiin dhabarkiisa aan u dhigno kii sawirka qaaday.
Waa inaan hubinaa in kamaraduhu tilmaamayaan sida isku midka ah dhulka sida ugu macquulsan. Haddii kale dhismaha wuu qalloocayaa ama qalloocanayaa. Haddii sawirku uusan sidan ku habboonayn, waxaa fiican inaad xoogaa dib u noqotid iyo / ama sawir ka qaadatid meel sare. Tusaale ahaan, fidinta gacmaha kor, laakiin marwalba u hoggaansamida sida ugu macquulsan ee qaanuunka tilmaamida isbarbar dhiga dhulka.
Xeeladahan fudud waxaan ku helaynaa natiijooyin fiican.
Sida loo qaado sawirrada biyaha hoostooda
Tan laguma talinayo xaalad kasta oo leh qalab mobile, xitaa haddii aan haysanno qalab quusin kara. Si kastaba ha noqotee, haddii aan wali go'aansanno, waxa ugu habboon ayaa ah inaan dooranno inaan ku darno kiis aan biyuhu ahayn.
Haddii aan rabno inaan nolosha ka dhigno mid fudud oo taleefanka ilaaliyo, waxaan sidoo kale isticmaali karnaa koob ama weel. Kaliya waa inaad qeyb hoosa gasho oo aad sawirka ka qaadatid gudaha. Sidaa awgeed waxaan ku guuleysaneynaa natiijo isku mid ah ama xitaa ka sii wanaagsan.
Ka iibso kiiska taleefannada casriga ah ee aan biyuhu ka jirin 'Amazon> Wax alaab ah lama helin..
Xeelad wanaagsan oo sawirro looga qaado biyaha hoostooda waa ku dheji dareeraha kaliya inta u dhexeysa dusha iyo biyaha, marka nus sawir ayaa ka soo bixi doona mid dabiici ah, qeybta kalena biyaha hoostooda, natiijada waa mid asal ah. Inta kale, waxaan kugula talineynaa inaad qaaddo dhammaan tallaabooyinka taxaddar ee kugu filan si aan taleefanka kuugu dhammaan.
Tilmaamahan ayaa kuu oggolaanaya inaad sawirro fiican guriga kaga qaadatid taleefankaaga gacanta, noogu sheeg sanduuqa faallooyinka maxay yihiin khiyaamada aad ugu jeceshahay inaad sawirro fiican ka qaaddo oo u qaybi tilmaamo dheeraad ah bulshada Androidsis.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida sawir fiican looga qaato moobilkaaga
Farshaxanka socodka ayaa kugu sugaya adiga oo saaran gaarigaaga tartanka ee Drift Champions
Sida loo daawado taxanaha bilaashka ah iyo filimada Netflix si sharci ah